How To Restart Windows Explorer The Proper Way - အရူးလေး ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
How To Restart Windows Explorer The Proper Way
ဒီနေ့ မျှဝေပေးမှာကတော့ windows Explorer ကိုအသုံးပြု၍ automatically restart ပြုလုပ်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် မသိတဲ့သူတွေကြားမှာတော့အသုံးတေ့မှာပါ ...ဆိုင်မှာ ထိုင်တာတို့ .. လူအများ နဲ့ သုံးတဲ့နေရာတို့ မှာ အပေါ့အပါး သွားချင်တဲ့အခါ သုံးတေ့မှာသေချာပါတယ် ၊ အင်္ဂလိပ်လိုရှင်ပြတာ က မှားနေရင်မရီနဲ့ နော် နားလည်သလို လုပ်ချတာ ကြွားတာလေ
Often times you will run into trouble when Windows Explorer doesn’t respond or stuck foralong time. Windows Explorer should in theory automatically restart itself if it crashes. In the case when it doesn’t there are couples ways you can restart Windows Explorer properly.
windows Explorer ကိုအသုံးပြု၍ automatically restart ပြုလုပ်နည်း
Use this method assuming when you can still access the Windows menu.
Press and hold Control + Shift + Right Click on any empty area on the Windows menu, you will see this option to let you “Exit Explorer”
အရင်ဆုံး start ကိုဝင်ပါ shut down ပေါ်မှာ မောက်ကို တင်ထားပါပြီးလျှင် Control + Shift နိုပ်ထားပါပြီးရင် ( ယာ ) ကလစ်တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါ.. ပေါ်လာတဲ့ ထဲကExit Explorerကိုနိုပ်လိုက်ပါ.... အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ
လော့ကျသွားပါပြီး ကွန်ပြူတာကလိလို့ မရတော့ပါဘူး ...... အဲဒါကိုပြန်ဖွင့်ချင်ရင်တော့ Control + Shift + Esc ကိုနိုပ်ပြီး windows Task Manager ကိုခေါ်လိုက်ပါ
Once this is done, you can go to task manager (by pressing Control + Shift + Esc) အောက်ကပုံ အတိုင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်
အပေါ်ဆုံး ဘယ်ဖက်ထောင့်က File ဆိုတာလေးကိုနိုပ်ပြီး New Task (Run…) လုပ်ပါ ၊ Go under File > New Task (Run…)
Just type in “explorer” into the text filed and press OK.........
Run ဘုတ်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ် အဲဒီအထဲမှာ Explorer ရေးပြီး ok လိုက်တာနဲ့စာမျက်နှာ မူလ အတိုင်းပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အောက်ပုံကိုကြည့်ပါ
Now your Windows Explorer should have restarted.
ပုံ ၂ ကိုကြည့်ပါ အဲင်္ဒီအထဲက processes ကိုနိုပ်လိုက် Explorer ကိုတွေ့ အောင်ရှာတွေ့ ပြီဆိုရင် Explorer ပေါ်မှာထောက်ပြီး (ယာ)ကလစ်တစ်ချက်ပေးလိုက် ပေါ်လာတဲ့ဝင်းဒိုးလေးထဲက End process ကလစ်လိုက် pc အားလုံး ကျသွားလိမ့်မယ် ပြန်ဖွင့်ချင်ရင်တော့ အပေါ်ကနည်းအတိုင်းပြန်ဖွင့်ပေးလိုက် အောက်ပုံကိုကြည့်
Alternatively you can always kill Windows Explorer from the task manager and go back to repeat the preview two step to re-launch the Windows Explorer again.
အပေါ့အပါးသွားနေတုန်းမှာ တော့အသုံးဝင်တာပေါ့ ပြီးပါပြီ ၊၊ windows7အတွက် သာ xp ရမရ မသိပါ